Bogga ugu weyn Dib u eegista Caalamiga ah ee Maamulka Lacagta 2021| Sidee U Shaqeeya?
Maareynta Lacagta Caalamiga ah (MMI) waxay ka caawisay dad badan inay si fiican u fahmaan sida loola macaamilo dhaqaalahooda iyo deynta ama arrimaha deynta.
Ma ka fikirtay naftaada sida aad u xallin doonto deyntaada iyo deyntaada? Ma la yaabtay sida aad isu dheelitiri doonto dakhligaaga iyo kharashkaaga? Dhammaanteen waxaan ku noolnahay inaan isticmaalno oo iibsanno wax kasta oo lacagtu ay iibsan karto ugu wanaagsan. Shirkadaha amaahda ama amaahda, waxaan ka iibsan karnaa wax kasta oo aan rabno xitaa annaga oo aan gacanta ku haysan lacag caddaan ah.
Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonaa wax kasta oo jira oo ku saabsan Maareynta Lacagta Caalamiga ah. Fadlan si taxadir leh u akhri maqaalkan ilaa dhamaadka isagoo ballan qaadaya inuu noqon doono mid wax ku ool ah, xog-ogaal ah, iyo iftiimin.
Waa maxay Maareynta Lacagta Caalamiga ah?
Maareynta Lacagta Caalamiga ah (MMI) waa hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo fadhigeedu yahay Maraykanka oo bixisa la-talin credit iyo waxbarasho bilaash ah shakhsiyaadka. Waxay ka caawisaa macaamiisha inay horumariyaan maaraynta deynta ama qorshaha dib u bixinta ku dhawaad ​​25% wada tashiyada. MMI waxaa inta badan taageera deyn-bixiyeyaasha. Maareynta Lacagta Caalamiga ah waxaa abuuray 1997-kii lix shirkadood oo la-talin maaliyadeed oo la-talin ah Adeegyada La-talinta Macmiilka (CCCS).
Akhri ALSO: Reviews Klarna 2021 | Sharci mise khiyaamo?
Taariikhda Kooban ee Maareynta Lacagta Caalamiga ah (MMI)
MMI way horumartay oo dib bay u habaysay wakhtiga oo dhan si ay u daboosho baahiyaha soo koraya ee macaamiisha iyo deymaha. Maareynta Lacagta ee Boostada waxaa la aasaasay 1997 taas oo ay sabab u tahay isku darka lix ganacsi oo la-talin amaah ah oo macaamiisha ah oo raadinaya inay si wanaagsan uga faa'iideystaan ​​tobannaan sano oo khibrad iyo khibrad isku dhafan. Waxay u dhaqaaqday inay iskeed isu taagto sidii hoggaamiye suuqa marka loo eego gaaritaanka macaamiisha iyo awoodaha tignoolajiyada. Maareynta Lacagta Caalamiga ah waxaa loo beddelay 2003 si ay si wanaagsan u matalaan baaxadda hawlaha ururka.
MMI waxa ay kortay sannadihii la soo dhaafay iyada oo la kaashanaysa ururada la-talinta amaahda ee dalka oo dhan. MMI hadda waa dalka ugu weyn ee adeegga buuxa ee aan macaash doonka ahayn ururka la-talinta macaamiisha, oo bixisa adeegyo kala duwan oo la-talin maaliyadeed iyo adeegyo waxbarasho sida deynta iyo la-talinta miisaaniyadda, la-talinta amaahda ardayda, la-talinta la- wareegidda, waxbarashada kicitaan iyo barnaamijyada shahaado-siinta, barnaamijyada fayoqabka maaliyadeed ee ururka, iyo wax ka badan oo dakhli ah oo ka badan $52.2 milyan iyo guud ahaan hantida qiimaheedu ka badan yahay $55.5 milyan.
Maareynta Lacagta Caalamiga ah waxay ku biirtay in ka badan 20 shirkadood oo la-talin amaah ah sannadihii la soo dhaafay. Sannadkii 2005, shirkadu waxay heshay akoonnada AmeriDebt taasoo qayb ka ah dacwadaha bangiyada AmeriDebt. Waxay bilawday degelka regiftable.com sannadkii 2006 si ay u dhiirigeliso dib u habeynta si ay lacag u badbaadiso. Barnaamijka "Soddon Tallaabo" ee MMI ee ku saabsan maareynta lacagta anshaxa ayaa la bilaabay 2008.
Akhri ALSO: 21ka Shabakadood ee Maareynta Lacagta ee ugu sarreeya 2021 -ka
Sida Caalamiga ah ee Maareynta Lacagtu u shaqeyso
Maareynta Lacagta Caalamiga ah waa hay'adda la-talinta deynta ee aan macaash doonka ahayn ee la heli karo ee ugu badan ee dalka laga heli karo. Macaamiisha raadinaya caawimada miisaaniyada waxay ku bilaabi karaan nidaamka iyaga oo booqda bogga internetka ee wakaalada, halkaas oo ay kala hadli karaan lataliye ama taleefan si ay u caawiyaan mar kasta oo geedi socodka socdo.
Maareynta Lacagta Caalamiga ah ayaa laga heli karaa dhammaan 50-ka gobol ee Mareykanka waxaana laga yaabaa inay kugu habboon tahay haddii aad ku dhacdo mid ka mid ah kuwan soo socda:
Ma rabtaa la talinta deynta iyo miisaaniyada taleefanka 24 saacadood maalintii, 7 maalmood todobaadkii?
Maareynta Lacagta Caalamiga ah xarunteeda kheyraadka khadka tooska ah ayaa bixisa muxaadarooyinka khadka tooska ah iyo webinarada bilaashka ah, iyo sidoo kale khadka tooska ah iyo kuwa lagu sheekeysto.
Haddii aad doorbidayso la-talin fool-ka-fool ah, Money Management International waxay goobo ku leedahay 25 gobol.
Ka dib masiibo dabiici ah, waxa laga yaabaa inaad u baahato gargaar bilaash ah. La-talinta masiibada ka dib ee wakaaladda ayaa kaa caawin karta inaad ku socoto FEMA, caymiska, iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ay musiibo keeni karto.
ARAG SIDOO KALE: Faallooyinka Caymiska Xayawaanka Trupanion 2021 | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Qiimaha iyo adeegyada MMI
MMI, sida ururada la-talinta deynta aan macaash doonka ahayn intooda badan, waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo leh heerar kala duwan iyo helitaan. Adeegyada la bixiyo waxaa ka mid ah:
1. Miisaaniyadda guud iyo la-talinta
Adeeg bilaash ah oo adiga iyo la-taliyahaagu aad uga gudubtaan miisaaniyaddaada iyo xaaladdaada dhaqaale. Wax lacag ah lagama qaado adeegan.
2. Qorshaha maaraynta deynta
La-taliyuhu waxa uu dejiyaa qorshe uu isku dayo deymahaaga macmiisha oo uu hoos ugu dhigo dulsaarkaaga, taas oo kuu oggolaanaysa in aad deynta ku bixiso saddex ilaa shan sano gudahood adiga oo bixinaya hal bil oo keliya.
Khidmad bilow ah ilaa $75 ayaa la bixiyaa. Qiimaha celceliska halkan waa $35. Ka dib khidmadda bilowga, khidmad bishii $50 ayaa la bixiyaa. Celceliska kharashka waa $24.
Akhri ALSO: Dib -u -eegista Bixinta Bixinta Deynta 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Xalaal & Khiyaano | Sida ay u shaqayso
3. La-talinta musallifnimada
Waa inaad ka qaybgashaa laba fadhi, mid ka hor xeraynta iyo mid ka dib marka deynta lagaa saaro, sida ay amartay maxkamaddu.
Waxaa lagaa rabaa inaad bixiso khidmad xaraynta kahor oo ah $50. Tani way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran xaaladdaada deganaanshaha. Waxa kale oo lagaa filayaa inaad bixiso khidmad ka hor $50.
4. Amaahda ardayda
La-taliyaha ayaa kuu sharaxaya beddelka lacag-bixintaada, kharash dheeraad ahna, waxa laga yaabaa inuu kula xidhiidho bixiyahaaga. Qiimaha adeega amaahda ardaygu waa $199.
5. La-talinta guryaha
Iibsadayaasha guriga markii ugu horeysay, mulkiilayaasha guryuhu waxay ka fiirsanayaan amaahda amaahda ah, iyo kuwa ay dhibaato ka haysato bixinta amaahda ama bixinta kirada, adeeggan waa la heli karaa. Qiimaha la-talinta guryuhu wuxuu u dhexeeyaa Bilaash ilaa $199, iyadoo ku xidhan adeegga aad doonayso in lagu qabto.
Post laxiriira: 10+ Caymiska Kiraystayaasha Ugu Fiican California | 2021 Liiska
Maxaa ka dhigaya Maareynta Lacagta Caalamiga ah ka duwan?
Adeegyo isku mid ah oo ay bixiso Money Management International waxaa bixiya tiro ururro la-talin ah oo aan faa'iido doon ahayn. Meesha uu qofku kaga duwan yahay kan ku xiga waa xagga aqoonsiga, gelida, iyo habka loo bixiyo adeegyadeeda. Halkan waxaa ah hoos u dhigista degdega ah ee MMI:
Aasaaska Qaranka ee La-talinta Amaahda waa urur madax-bannaan oo xaqiijiya heerar sare oo ku-dhaqanka la-taliyayaasha dhexdooda oo kormeera wakaaladda. Ururkani waxa uu aqoonsanayaa MMI.
2. Taageerada internetka
Mareegta MMI waxay bixisaa adeegyo la-talin iyo sidoo kale ilo waxbarasho. Ma jiraan ururo badan oo tan si hufan oo hufan u fulin kara.
3. Heerka dhamaystirka qorshaha maamulka deynta
Marka loo eego Maareynta Lacagta Caalamiga ah, 67 boqolkiiba macaamiisha iska diiwaangeliya Qorshaha Maareynta deynta ayaa dhammaystira.
Shirkaddu waxay ka hawlgashaa 50 gobol waxayna xafiisyo ku leedahay 25 ka mid ah.
5. Xeeladda maaraynta deynta ee MMI
Qorshayaasha maaraynta deynta waa hab wax ku ool ah oo kharash-ku-ool ah oo waqti-ku-ool ah si loo bixiyo waajibaadka kaararka deynta.
Deyntaada waxaa la isugu geeyaa hal bil oo lacag bixin ah oo leh dulsaar hoose marka aad ku jirto Qorshaha Maareynta deynta. Waxaa xusid mudan in dhimista heerka ribada ay isku mid tahay dhammaan shirkadaha la-talinta deymaha waxayna ku saleysan yihiin shuruudaha deyn bixiyayaasha iyo sidoo kale xaaladdaada dhaqaale. Qorshaha lacag-bixinta bilaha ah ayaa kaa caawin doona inaad iska bixiso deyntaada muddo saddex ilaa shan sano ah.
Ma awoodi doontid inaad isticmaasho kaararka deynta ama ma aad samayn kartid khad cusub oo credit inta lagu jiro wakhtigan. Xitaa ka maqnaanshaha hal lacag-bixineed waxay sababi kartaa in Qorshaha Maareynta Deynta uu burburo, taasoo kaa tagaysa inaad kaligaa wax ka qabato dheelitirka deyntaada, heerka dulsaarka asalka ah. Qorshayaasha Maareynta deynta waxaa isticmaala qiyaastii 25% ee Maareynta Lacagta Macaamiisha Caalamiga ah ee mara deynta iyo la-talinta miisaaniyada.
Goorma ayaan Tixgalinayaa Qorshaha Maareynta Deynta?
Waa inaad tixgelisaa qorshaha maaraynta deynta marka aad bilowdo inaad la kulanto mid ka mid ah kuwan soo socda:
Haddii ay dhibaato kaa haysato bixinta deyntaada billaha ah.
Haddii deynta macaamiishu ay u dhexeyso 15% iyo 50% dakhligaaga sanadlaha ah, waxaad ku jirtaa dhibaato.
Haddii aad aaminsantahay in aad ku bixin karto shan sano gudahood.
Haddii aadan awoodin inaad hesho deyn xoojinta deynta.
Aad bay muhiim u tahay in la ogaado in xalkan deyn cafinta, si kastaba ha ahaatee, uusan dabooli doonin dhammaan dhibaatooyinka deyntaada. Qorshayaasha Maareynta Deynta sida caadiga ah ma daboolaan kharashyada caafimaadka, deymaha ardayda, deymaha baabuurta, ama amaahda guryaha. Baadh ikhtiyaarrada kale ee deyn cafinta ka hor intaanad samaynin Qorshaha Maareynta Deynta.
Adeegga Maaliyadeed ee ay bixiso Maamulka Lacagta Caalamiga ah
Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah adeegyada takhasuska leh ee ay bixiso Money Management International, sida ku cad shabakadeeda:
Ka Ilaalida Gurigaaga Inaan Lala wareegin (la-talin guri)
Dib-u-bixinta Kaarka Daynta
Hubinta Dakhliga iyo Kharashaadka
Bankruptcy waa habsocod sharci ah oo ku lug leh xeraynta codsiga musalsalka (La-talinta Kicinta)
Barashada Warbixinta Dayntaada
Dib u celinta Amaahda: Dulmar
Daryeelka Amaahda Ardayga
SSI iyo Maareynta Faa'iidooyinka Naafada
Dib u eegista Caalamiga ah ee Maamulka Lacagta
Qaar badan oo ka mid ah dib u eegista waxay si toos ah uga yimaadaan macaamiisha la xaqiijiyay, laakiin kuwa kale waxay ka yimaadaan boggaga saddexaad sida Facebook, Google, Trustpilot, iyo Xafiiska Better Business Bureau. Nidaamka qiimeynta 5 Xiddig, Maareynta Lacagta Caalamiga ah waxay xireysaa 4.9. Qiimaynta Guud ee 1,940 ee dib u eegista xisbiga 1aad, 1822 qof ayaa siisay Money Management International 5 xiddigood. 74 qof ayaa siiyey 4 xiddigood. 19 qof ayaa siiyay 3 xiddigood. 4 qof ayaa siiyay 2 xiddig halka 21 kaliya ay siiyeen 1 xiddig.
Trustpilot waxay leeyihiin dib u eegis iyaga u gaar ah boqolkiiba. 89% dhammaan dib u eegista la soo aruuriyay ayaa bixiyay warbixin aad u wanaagsan. 6% dadku waxay moodayeen in qorshahani yahay mid weyn. Kaliya 2% ayaa u maleynayay inay tahay dhexdhexaad, wax ka yar 1% waxay u maleeyeen inay sabool tahay halka 2% ay u maleeyeen inay runtii xun tahay
FAQs ee Maareynta Lacagta Caalamiga ah
Maxaa dhacaya haddii aanan haysan lacag igu filan oo aan ku bixiyo biilasha kaarka deynta?
Koontadaada waxa ay geli doontaa dayn haddii aadan bixin inta ugu yar. Haddii ay tani dhacdo, qaado tillaabooyinka soo socda: Amaahiyahaagu wuu kula soo xidhiidhi doonaa si uu uga dalbado inaad bixiso lacagihii seegay. Haddii aadan bixin lacag-bixinta, akoontu way dhici doontaa. Haddii aadan weli bixin, waxaa laga yaabaa inay qaadaan tillaabooyin aad u daran, sida inay shaqaaleysiinayaan dayn ururiye si ay u soo ceshadaan lacagta lagugu leeyahay.
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee aan isaga bixin karo deynta kaarka deynta?
Ku bilow inaad si fiican u fahamto dhaqaalahaaga si aad u go'aamiso inta aad awoodid inaad bixiso bil kasta. Samee miisaaniyad adiga oo samaynaya liiska dakhligaaga iyo kharashyadaada.
Ma jiraan xaddidyo kaararka deynta?
Kaararka qaarkood waa ay heli karaan kuwa leh credit-ka daciifka ah waxayna leeyihiin xad dayn yar oo ku dhow $274. Kaararkani waxay badanaa leeyihiin dulsaar sare, laakiin haddii aad ku bixiso wakhtigooda, waxay kaa caawin karaan inaad horumariso dhibcahaaga deynta iyagoo u muujinaya deyn bixiyayaasha kale inaad aamin tahay.
Suurtagal ma tahay in aan lahaado deyn kaarka deynta wadajirka ah?
Koontada kaarka deynta waxay ku jiri kartaa kaliya hal qof magaciisa, markaa ma jiro wax la yiraahdo kaarka deynta wadajirka ah. Si kastaba ha ahaatee, shirkaddaada kaarka deynta ayaa laga yaabaa inay kuu ogolaato inaad u hesho kaarka labaad lammaanahaaga ama qof kale.
Suurtagal ma tahay in xabsiga lagu galo deynta kaarka deynta?
Iyadoo dad badani ay arrintan ka walaacsan yihiin, haddana suurtogalnimada in lagu xukumo xabsi deymo aan la bixin ayaa ah mid aan suurtagal ahayn. Waa ikhtiyaarka kaliya ee noocyada deymaha gaarka ah, sida ganaaxyada dembiyada iyo waajibaadka dawladda, waxaana kaliya loo isticmaalaa sidii xalkii ugu dambeeyay marka dhammaan xulashooyinka la dhammeeyo.
Waxaan Sidoo kale Dib u Xusuusinaynaa
Dib u eegisyada Software-ka Cashuuraha ATX 2021
Maareynta Lacagta ee Dhallinta 101: Sida Lacag loogu keydiyo Dhallinyarada 2021 -ka
Dib u Eegista Deynta Xorriyadda 2021: Sidee U Shaqaysaa | Khiyaano ama Sharci?
10ka Software ee Maareynta Lacagta ugu Wanaagsan ee la Isticmaali karo 2021
Dib -u -eegista Xorriyadda Xorriyadda 2022: Fadeexad ama Dariiqa Sharciga ah ee Macaashka
Waxaa laga yaabaa inaad akhrinayso dib u eegista barnaamijka hubinta xorriyadda maxaa yeelay in kastoo aad maqashay dhammaan…
Faallooyinka Xiriiriyaha Walmart: Sida lacag looga helo Walmart sanadka 2022
Suuqgeynta xulufadu waa hal dariiqo oo lacag lagu kasbado internetka. Waxay kaa badbaadineysaa walbahaarka la kulanka macaamiisha…
Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaa sare u kacay fursadaha maalgashi iyo dhex dhexaadiyeyaasha maalgashiga sida Stash.…
Faallooyinka AMPAlive 2022: Miyuu yahay Sheyga Miisaanka Dhimista ugu Fiican ama Fadeexad?
AMPAlive waa kaab dabiici ah oo ka yimi saaraha caanka ah ee Sun Coast Sciences. Sayniska Xeebta Qorraxda…
Faallooyinka DealDash 2022: Sida ay u Shaqayso | Ma sharci baa mise waa khiyaano qandaraasle
Iibka alaabada ama adeegyada ka yar inta la qiyaasay waa arrin xiiso leh. Marka laga reebo helitaanka qiimo dhimis,…
Sharkadaha amaahda ee maxalliga ah ma khiyaamo baa mise waa sharci? Sir aad u baahan tahay inaad ogaato
Daan -daansiga amaahda maxalliga ah ma khiyaamo baa mise waa sharci? Ogaanshaha saxda ah ee tani kaliya kuma badbaadin doonto…